सहकारी Archives ~ Page2of 14 ~ Banking Khabar
वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न सहकारीले भुमिका खेल्नुपर्ने : पद्मा अर्याल
स्मारीका अग्रवाल । बैंकिङ खबर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीबाट वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २७ औं वार्षिक साधारणसभाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एक घर बराबर एक जना सहकारी सदस्य र अनिवार्य गराई एउटा सहकारी एउटा रोजगारीको अभियान ल्याएर वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको
बैंकिङ खबर । नियमन कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेपछि सरकारले सहकारीमाथि कठोर नीति अपनाउन थालेको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन कार्यान्वयनमा कडाई गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्तिको स्रोत खाजिने भएकाले कालोधन लुकाउने माध्यम सहकारी बनेको छ । देशमा झन्डै ३५ हजार सहकारी संस्था संचालनमा छन्, जसको नियमनको अवस्था
बैंकिङ खबर । श्री टिकुलीगढ दुग्ध उत्पादक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. तिलोत्तमा–१४ रुपन्देहीले २४ औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा यादबको अध्यक्षता र प्रदेश नं. ५ का प्रदेश सभा सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । अध्यक्ष जनार्दन शर्मा यादवले बार्षिक प्रतिवेदन गर्दै
बैंकिङ खबर । दशैंका अवसरमा दाङका छ महिला सहकारीले करीब दुई करोडको खसीबोका उत्पादन गरेर बिक्री गरेका छन्। यस वर्षको दशैँमा सबैभन्दा बढी लमही नगरपालिका ९ रिहारमा रहेको कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले ९० लाख ४१ हजार मूल्यका एक हजार ५३० खसीबोका बिक्री गरेको छ। सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवीमाया थापाले सहकारीमा आबद्ध महिलाले उत्पादन
सहकारी क्षेत्रका महत्व एवं चुनौतिहरु
बैंकिङ खबर । कुनैपनि मुलुकको आर्थिक सामजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालमा पनि करिब ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी स्थापना भइसकेका छन् । समुहमा काम गर्ने भएकाले सहकारीले सदस्यहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याएको हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारीको अवधारणामा अधिकांश सहकारीहरु संचालनमा छन् । कृषि सहकारी
नेपालमा ३४ हजार बढी सहकारी सञ्चालनमाः इतिहास र वर्तमान
बैंकिङ खबर । प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मङकाखलः, पर्म आदि नामबाट सहकार्यको शुरुआत भएको पाइन्छ । विधिवत रुपमा सहकारीको अवधारणा नभएपनि सहकार्यको अवधारणाको विकास भइसकेको थियो । सहकारीको इतिहास नेपालमा छ दशक लामो छ । वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०१३ मा तत्कालिन
बैंकिङ खबर । मानव सभ्यताको शुरुवात सँगै समूहमा बस्ने, सामूहिक रुपमा काम गर्ने र सुख दुःखमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने परिपाटीबाट सहकारीताको भावना प्रकट भएको पाईन्छ । विवाह, ब्रतवन्ध, काजक्रिया आदि धार्मिक कार्य सम्पन्न गर्न समाजका सवै सदस्यहरु सम्मिलित भई सहकार्य गर्ने परम्परा अझै कायम रहिआएको छ । सहकारीताको शुरुवात फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी आदि देशबाट
अलपत्र अवस्थामा सहकारी : संख्या धेरै, व्यवस्थापन कमजोर
बैंकिङ खबर । संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरु अलपत्र परेका छन् । हाल देशभर ३५ हजार सहकारी संचालनमा रहेका छन् । तर, प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनको अभावमा सहकारी क्षेत्रको बिचल्ली भएको छ । हाल संचालनमा रहेका ३४ हजार ८ सय १२ वटा सहकारी संस्थाहरुमा ६५ लाख सर्वसाधारण आवद्ध छन् ।
बैंकिङ खबर । आफ्नो बचत डुब्ने खतरा देखेपछि नेपालगन्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । करोडौँ रकम हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो रकम डुब्ने खतरा देखेपछि बचतकर्ताले ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी असुलीका लागि दबाब दिन थालेका छन् । सहकारीको कुल पूँजीको झन्डै ७० प्रतिशत रकम अपचलन भएको जिल्ला सहकारीले यसअघि
बैंकिङ बखर । सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुद्वारा आर्थिक लगानी गरी सोमा व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशिल व्यवसायीक संगठन नै सहकारी हो । सहकारी एउटा यस्तो उद्यम पनि हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गदर्छ । सहकारी समुदायमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको अभियान हो
बैंकिङ खबर । नेपालको सहकारीको व्यवस्थापन र नियमनको प्रभावकारीतामाथि सँधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सहकारीबाट ठगी गर्ने, स्रोत नखुलेका रकम लुकाउन प्रयोग गरिने लगायतका विकृति बढेपछि अब भने सरकारको ध्यान सहकारीको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । संख्यात्मक रुपमा अत्याधिक बढी रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई अर्ब मर्जर गरेर निश्चित संख्यामा झारिने भएको छ । भूमि
बैंकिङ खबर । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि पछिल्लो समय केही कदमहरु चाल्न थालिएको छ । नियमनको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न ठगीका घटनाहरु भइरहेको पाइन्छन् । केही सहकारीको बदमासीको कारण समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको लोकप्रियता नै धरापमा पर्दै गएको अवस्थामा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन व्याजदरको सिलिङ तोकिएको छ भने दोहोरो सदस्यता हटाउन निर्देशन जारी गरिसकिएको अवस्था छ
व्यबस्थित बन्दै सहकारी क्षेत्र : अब खराब सहकारी उम्कन नपाउने
बैंकिङ खबर । नियमनको अभावका कारण विभिन्न ठगीका घटनाहरुले आलोचित बन्दै र लोकप्रियता गुमाउँदै गएको सहकारी क्षेत्र अब व्यवस्थित बन्ने भएको छ । केही सहकारीको बदमासीको कारण समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको लोकप्रियता नै धरापमा पर्दै गएको अवस्थामा अब सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन कदमहरु चालिने भएको हो । व्याजदरको सिलिङ सहकारी क्षेत्रमा सँधै टिप्पणीको विषय बनेको व्याजदरलाई अब
बैंकिङ खबर । देशको आर्थिक विकासका लागि सहकारी महत्वपुर्ण मानिएता पनि यसको व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको छ । सहकारी संस्थाहरुले दिने कर्जाको ब्याजदरमा सीमा तोक्न नसक्दा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था व्यवस्थित गर्न असफल भएको हो । हाल सहकारी संस्थाहरुले ग्राहकहरुमा मनोमानी रुपमा ब्याज लिइरहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले कति सम्म ब्याजदरमा कर्जा दिने
बैंकिङ खबर । सहकारीको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा सहकारीको कारोबारमा संका उत्पन्न भइरहेकोमा चौतर्फी रुपमा व्याज तोकिनुपर्ने आवाज आइरहेको थियो । तर यसको व्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्न नमिल्ने बताइएपछि अन्यौलता बढेको छ । सरकारले सहकारीको नियमनलाई बलियो बनाउन सकेको छैन । विश्वासका आधारमा सहकारीहरु संचालीत